Predado - 克罗地亚语 - 缅甸语 翻译和实例
您搜索了: predado (克罗地亚语 - 缅甸语)
I to ne samo kako se nadasmo, nego same sebe predadoe najprvo Gospodinu,aonda nama, po volji Bojoj.
ထိုသို့ပြုကြသော်၊ ငါတို့မြော်လင့်သည်အတိုင်းထက်မကပြု၍၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ရှေးဦးစွာသခင်ဘုရား၌၎င်း၊ ငါတို့၌၎င်း၊ မိမိတို့ကိုမိမိတို့ လှူကြ၏။
Pilat odvrati: "Zar sam ja idov? Tvoj narod i glavari sveæenièki predadoe te meni. to si uèinio?"
ပိလတ်မင်းက၊ ငါသည်ယုဒလူဖြစ်သလော။ သင်၏လူမျိုးနျင့်တကွ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့သည် သင့်ကိုငါ၌အပ်ကြပြီ။ သင်သည် အဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟုမေးလျှင်၊
"Rodozaèetnici pak, iz zavisti, Josipa predadoe u Egipat. Ali Bog bijae s njim
အမျိုး၏ အဘတို့သည် လည်း ငြူစူသောစိတ်ရှိ၍၊ ယောသပ်ကို အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောင်းလိုက်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုစောင့်မတော် မူလျက်၊
Znao je doista da ga predadoe iz zavisti.
အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ မေးသနည်းဟုမူကား၊ ထိုသူတို့သည် မနာလိုသောစိတ်နှင့် ယေရှုကို အပ်နှံ ကြောင်းကို ပိလတ်မင်းသိ၏။
Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Gaze, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer odvedoe sve u izgnanstvo i Edomu predadoe,
တဖန်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဂါဇမြို့သည် ချုပ်ထားသောသူအပေါင်းတို့ကို ဧဒုံမင်း၌ အပ်ခြင်းငှါ သိမ်းသွားသောအပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။
kako nam to predadoe oni koji od poèetka bijahu oèevici i sluge Rijeèi -
ငါတို့သည် ထင်ရှားစွာဖြစ်လေပြီးသော အတ္ထုပ္ပတ္တိများကို ငါတို့အားကြားပြောသည် အစဉ်အတိုင်း မှတ်သားသောစာကို စီရင်ရေးထားသောသူ အများရှိကြသည်ဖြစ်၍၊
Nakon tri dana sazva on idovske prvake. Kad se sabrae, reèe im: "Ja, braæo, ne uèinih nita protiv naroda ni obièaja otaèkih,aipak me okovana u Jeruzalemu predadoe u ruke Rimljana.
သုံးရက်လွန်သောအခါ၊ ပေါလုသည် ယုဒလူ အကြီးအကဲတို့ကို ခေါ်၍စုဝေးစေပြီးလျှင်၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ အကျွန်ုပ်သည်ယုဒလူမျိုးကို မပြစ်မှား၊ မိစဉ်ဘဆက် ကျင့်သောထုံးတမ်းကို မပယ်သောသူဖြစ်လျက်ပင်၊ ယေရှုရှလင်မြို့သားတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို အကျဉ်းထား၍ ရောမလူတို့ လက်သို့ အပ်လိုက်ကြ၏။
Kad je odluèeno da odjedrimo u Italiju, predadoe i Pavla i neke druge uznike satniku carske èete, imenom Juliju.
ထိုအခါငါတို့သည် ဣတလိပြည်သို့သင်္ဘောနှင့် ကူးရမည့်အကြောင်းကို စီရင်ပြီးမှ၊ ယုလိအမည်ရှိသော ဩဂုတ္တုတပ်နှင်ဆိုင်သော တပ်မှူး၌ ပေါလုမှစ၍ အကျဉ်းခံသောအခြားသူတို့ကို အပ်ကြ၏။
Nabukodonozor viknu: "Blagoslovljen bio Bog adrakov, Meakov i Abed Negov, koji je poslao svog anðela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega te se ne pokorie kraljevoj naredbi, veæ radije predadoe svoje tijelo ognju negoli da tuju ili se klanjaju drugome osim svome Bogu!
နေဗုခဒ်နေဇာ မင်းကြီးကလည်း၊ ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါတို့၏ ဘုရားသခင်သည် မင်္ဂလာ ရှိတော်မူစေသတည်း။ မိမိတို့ဘုရားမှတပါး၊ အခြားသော ဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစား၍ မင်းကြီးအမိန့်တော်ကို ဆန်လျက်၊ မိမိတို့ကိုယ်ကိုပင် အပ်နှံသော ကျွန်တော်ရင်း တို့ရှိရာသို့၊ ထိုဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်ကို စေလွှတ်၍ ကယ်တင်တော်မူပြီ။
Ognju predadoe Svetite tvoje, do zemlje oskvrnue Prebivalite tvoga imena.
သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို မီးရှို့ကြပါ၏။ နာမ တော်ကျိန်းဝပ်ရာ တဲတော်ကို မြေတိုင်အောင် ရှုတ်ချ ကြပါ၏။
因此九二共识 (简体中文>英语)hinc omnia (拉丁语>法语)korisnike (塞尔维亚语>俄语)للرياضيات (阿拉伯语>英语)보통 (韩语>英语)eu sou fraca (葡萄牙语>英语)buenos dias, bella (西班牙语>英语)printkampagnen (德语>英语)b seam upper structure floor contours (英语>俄语)rechtsetzungsprogramms (德语>意大利语)opthalmology (英语>希腊语)non riescoaimmaginare (意大利语>英语)holistic perspective (英语>他加禄语)dødeligt (丹麦语>塞尔维亚语)essay on domestic animals kannada (英语>卡纳达语)אהליהם (希伯来语>希腊语)amoebedysenterie (荷兰语>意大利语)gestreept (荷兰语>德语)Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla (瑞典语>英语)நீங்கள் (泰米尔语>爱沙尼亚语)1 06 (西班牙语>丹麦语)z odpowiednim wyprzedzeniem (波兰语>英语)stultus (拉丁语>英语)que horas vo trabalho (葡萄牙语>英语)tu es pénible (法语>英语)